Ngokuqhelekileyo kuzo zonke iintsana zokubetha kwezandla kunye neenyawo kukuziphatha kwendalo ngexesha lomdlalo. Ngomdla wokudlala, iintsapho zihlala ziluma kwaye zikhawuleza zikhawuleze. Ukubamba okunjalo akusoloko kubangele kwimiphumo emibi, kodwa ukuba lo msebenzi uyaqhubeka ngexesha elizayo, ngokuqinisekileyo kuya kubakho ukubonakala kweentlobo ezahlukeneyo zokulimala. Ngako oko kubaluleke kakhulu ukuba wazi indlela yokutshatyalaliswa kwenyoka.
Ngokuya kwimithetho yepakethi.
Okokuqala, intshontsho kufuneka inqunywe ukuluma kakhulu, kwaye ngokukhawuleza iyancipha ukubetha kanye kunye. Kubalulekile ukumfundisa ukulawula amandla emisipha yakhe kunye nokuzibamba ekukubetheni. I-Puppy imele nje ifundiswe ukuqala ukucinga, kwaye ke into enokuyenza. Emva koko akayi kuluma.
Kwiipaki zeepaki ziyaziqhelanisi ukubetha kakhulu xa zidlala nabazalwana kunye nonina. Ukuba intsana iqala ukuluma abazala bayo kakhulu, ke abo baqhwaba ngeentlungu kunye nokuhleka ngokukhawuleza baphela. Ngaloo ndlela, intsana ngokwayo iyancatshiswa ekubuhlungu. Ukuba intshontsho emdlalweni kakhulu imbiza umama, ngokukhawuleza uza kujongana nesigwebo esibi. Ngako oko kubaluleke kakhulu ukuvumela i-puppy ixesha elithile lokuchitha ixesha kunye nonina kunye namanye amantombazana. Umama uya kufundisa i-puppy imigaqo yokuziphatha kweenja, kwaye emva kokuba kulula ukuba kuncibilikise ukutshiza.
Kuba intsana, ukuluma ngenye yeendlela zokuphuhliswa kwayo. Ngokuphindaphindiweyo kwaye ngokukhawuleza bayakwenza xa amazinyo abo eqala ukuqhuma. Xa kwenzeka, i-puppy ifuna ukumba yonke into ayibonayo. Abanini baninzi banenkxalabo xa isilwanyana sawo esine-sweet, esilungileyo esilethwa endlwini siya kuba isilwanyana esingenakulawula. Kubalulekile ukuqonda - intsapho ayenzi nto ngenjongo, yinto enye ebalulekileyo ebomini bakhe. Kumele uthathe isinyathelo sokuqala ekuqeqesheni intshontsho, njengoko oku kungakhokelela kwingxaki enkulu kwixesha elizayo.
Akukho mfuneko ukuba uqale uvumele ipilisi ukuba idlale neengxenye zomzimba. Ngaloo ndlela, uvumela inkukhu ukuba icinge ukuba ungaluma ulusu. Ungalokothi uvumele intsana idume, nangomunwe. Ukuba uthe wagqiba kwelokuba unqamle intshontsho kule nto, kufuneka uyenqume njalo emva kokuba uqala ukubetha.
Ngokukhawuleza xa inkukhu iqala ukukhala kwakhona, yakhala ngokukhawuleza okanye ithi "Ay! ". Emva koko, ngokukhawuleza, ngokugwetywa ujonge kwaye ushiye. Buyela ngomzuzu ngomdlalo wokudlala. Buza i-puppy ukuba idlale nayo. Ukuba uqala ukuma kwakhona, memezele ngokumemeza kuye uze ushiye. Amantombazana adibanisa kakhulu nabantu, bathanda ukudlala. Ukuyeka ngokukhawuleza komdlalo kuya kudibanisa iingqondo zabo ngokuluma, ngoko ekugqibeleni bayazama ukuyeka ukubetha. Intsana ayifuni ukukulimaza nonke, kwaye ukukhala kwakho kuya kubanceda baqonde ukuba ukubetha kuzisa intlungu.
Ukuba, emva kokusebenzisa le ndlela, intshontsho isoloko iyaluma, zama ukusebenzisa indlela nge-tin enomsindo. Thatha ingxowa engenanto, ubeke iimali ezimbalwa apho kwaye uvale isiqhekeza. Ngokukhawuleza xa inkuku iqala ukubetha, yinike umyalelo wezwi kwaye ngexesha elifanayo ugubungele ingqungquthela. Unokwazi ukulahla intombazane ecaleni kwidlwane, kodwa ungayiphonsa kwidlwane. Lo mqondiso uzomeleza umyalelo wezwi. Xa intshontsho iyeka ukukhala, mkhuthaze.
Kwakhona i-puppy ingavunyelwa ukudlala kunye neentsapho zazo. Unokurekhoda i-puppy ekufundiseni izifundo zokuthobela, apho uya kusebenzisana nezinye izinja. Ukuba uhlambalaza ukudlala nazo zonke ezinye izinja, uya kufumana iintlungu ezimbalwa. Oku kusebenza ngokugqithiseleyo xa kunconywa intshontsho. Emdlalweni onamapopu anjengeengqondo, yena ngokwakhe ufunda isicatshulwa esifanelekileyo. Oku kumnceda ukulawula ukuziphatha kwakhe, ukukhulula umnqweno wokuluma ezinye iintsana.
Ungathambisa izandla zakho nge-colocite okanye ugibe ngegalikhi, ukuze xa uluma inja ayithandi intetho yezandla zakho. Le ndlela inokusebenza ngokucokisa intshwantsho yenzaka, kungekudala uyayeka ukuyenza. I-Puppy kufuneka isetyenziswe rhoqo. Intswelo ekhulelwe nekhathele ayiyi kuba nomnqweno wokulimaza ukukhala. Vumela inkuku idlale enye, isebenze, uyibeke ekuqaliseni kwakho. Oku kuncedo kakhulu kumantombazana abathanda ukuluma, kuba inceda ukulawula.
Indlela eyona ndlela yokulusa intshontsho kukuluma. Mnike amathoyizi amaninzi afuna ukufuna. Thatha intshontsho, udlale naye kumdlalo wakho oyintandokazi inja "Yizisa! "- oku kuya kuphazamisa ingqalelo ekubheni. Ngokukhawuleza xa eqala ukukhahlela kwaye ungalimi, umdumise uze umphathe. Ngentombazana, kufuneka udlale imihla ngemihla ngemizuzu eyi-15-30 ubuncinane kabini ngosuku. Kuya kumphazamisa lula kumcamango wokutya into ethile. Vumela onke amalungu omndeni wakho ahlale eqhubekayo, usebenzisa imiyalelo yezwi "musa ukuluma." Awukwazi ukuzenza inja ngemidlalo enobudlova, njengoko oku kungakhokelela ekuqhubekeni kobudlova.
Ungalokothi usebenzise isijeziso esingokomzimba, ufuna ukutshisa intsana ukuba ilume. Oku kuya kumkhuthaza ukuba alumke kunzima, uthathe ukuziphatha kwakho njengomngeni. Ungalokothi ushiye abantwana abancinci kunye namantombazana, kuba abanako ukuyeka ukuziphatha kweenja. Ukuba yonke into eyenziwa ngokuzinzileyo kwaye ngokuqhubekayo, ngokuqinisekileyo uya kuphumelela ekukhuliseni intshontsho yakho.
Imikhwa yezinja zezilwanyana
Inkatha yokurhawula izifo
Tart nge zucchini, feta kunye nemifino
Izononongo zobugcisa zonyango lweenwele
Iimbono ezintsha zokudala iimemo zomtshato
I-fat in husk e-anyanisi